FREE YOUTUBE DOWNLOADER FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Egwuregwu Apple na-ewu ewu gburugburu ụwa ma ugbu a ọtụtụ nde ndị ọrụ na-eji kọmputa arụ ọrụ na MacOS. Taa, anyị agaghị emepụta ọdịiche dị n'etiti sistemụ arụmọrụ a na Windows, kama ka anyị kwuo banyere ngwanrọ na-eme ka nchedo nchekwa nke ịrụ ọrụ na PC. Ụlọ akwụkwọ na-etinye aka na mmepụta nke antiviruses, na-emepụta ha ọ bụghị naanị na Windows, kamakwa na-eme mgbakọ maka ndị ọrụ nke ngwá ọrụ Apple. Anyị chọrọ ịkọ maka ụdị ngwanrọ ahụ na isiokwu anyị taa.
Norton Security - akwụ ụgwọ antivirus, na-enye nchedo oge. Nwelite ntanetị oge ọ bụla ga-enye aka kpuchido gị site na faịlụ ọjọọ. Tụkwasị na nke ahụ, Norton na-enye ndị ọzọ nchebe maka ozi nkeonwe na nke ego mgbe gị na saịtị na Intanet na-emekọ ihe. Mgbe ịzụtara ndenye aha maka MacOS, ị ga-enweta ya maka ngwaọrụ iOS gị, ọ bụrụ na, n'ezie, anyị na-ekwu okwu banyere Ọkachamma ma ọ bụ Nwepụta.
Ọ ga-amasịkwa m ịkọwa nhọrọ nchịkwa nke nne na nna maka ikike maka netwọk ahụ, yana ngwá ọrụ maka ịmepụta ndabere nke foto, akwụkwọ na data ndị ọzọ a ga-etinye na nchekwa igwe ojii. A na-ahazi nke nchekwa ahụ n'otu n'otu maka ego. Norton Nche dị maka ịzụta na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti nke ụlọ ọrụ ahụ.
Download Norton Nche
Ọzọ na akara bụ Sophos Antivirus. Ndị mmepe na-ekesa nsụgharị free n'enweghị oge ọ bụla, ma na-arụ ọrụ dị ntakịrị. N'ime nhọrọ ndị dịnụ, M ga-achọ ịkọ maka njide ndị nne na nna, nchedo weebụ na kọmputa ntanetịchị na-achịkwa netwọk site na iji weebụ weebụ pụrụ iche.
Maka ngwaọrụ ịkwụ ụgwọ, ha na-emeghe mgbe ịzụrụ akwụkwọ ntinye aka na ntinye aka, na nchedo ọrụ site na ntinye faịlụ, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ dị maka ịchịkwa nchekwa. Ị nwere oge ikpe nke ụbọchị 30, mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-achọ ikpebi ma ị ga-azụta nsụgharị dị mma ma ọ bụ na ịnwere ike ịnọgide na ọkọlọtọ.
Avira nwekwara ihe antivirus maka kọmputa na-arụ MacOS. Ndị mmepe na-ekwe nkwa nchebe dị na netwọk, ozi gbasara ọrụ usoro, tinyere egwu egwu. Ọ bụrụ na ịzụta mbipute Pro maka ego, nweta nyocha ngwa ngwaọrụ USB na nkwado nchịkọta ngwa ngwa.
Avira Antivirus interface dị nnọọ mfe, ọbụnakwa onye na - enweghị ahụmahụ ga - ejikwa njikwa ahụ. Maka nkwụsi ike nke ọrụ a, ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchọta ọkọlọtọ, ị mụọla egwu. Mgbe a na-emelite ọdụ data na akpaghị aka, usoro ihe omume ahụ ga-enwe ike ịnagide egwu ọhụrụ ngwa ngwa.
N'ịmara ọtụtụ ndị, Kaspersky mekwara otu nsụgharị nke Intanet maka kọmputa site na Apple. Free maka gị dị naanị ụbọchị 30 nke oge ikpe, mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-enye ya ịzụta nzukọ zuru oke nke onye ahụ na-agbachitere ya. Ọrụ ya na-agụnye ọ bụghị naanị njirimara nchebe, kamakwa mkpọchi kamera weebụ, ntanetị weebụ, nkwụnye nchekwa nchekwa nchekwa, yana njikọ ezoro ezo.
Ọ bara uru ikwu banyere ihe ọzọ na - adọrọ mmasị - nchedo njikọ site na Wi-Fi. Kaspersky Internet Security nwere nje nje virus, ọrụ nke nyochaa njikọ dị mma, na-enye gị ohere ịnye ego nkwụnye ego ma chekwaa mwakpo netwọk. Gụọ ndepụta zuru ezu nke atụmatụ na ibudata ngwanrọ a ị nwere ike ịnwe na ebe nrụọrụ weebụ ukara nke ndị okike.
Download Kaspersky Internet Nche
ESET Cyber ​​Nche
Ndị okike nke ESET Cyber ​​Security na-etinye ya dị ka antivirus ngwa ngwa ma dị ike, na-akwụ ụgwọ na-enye ọrụ ọ bụghị naanị iji chebe onwe ya pụọ ​​na faịlụ ọjọọ. Ngwaahịa a na-enye gị ohere ijikwa mgbasa ozi mgbasa ozi, na-enye nchekwa na netwọk mmekọrịta, nwere uru "Egbochi ohi" ma ọ naghị ejikarị usoro usoro ihe ngosi.
Maka ESET Cyber ​​Security Pro, ebe a ka onye ọrụ ọzọ na-enweta ihe nchekwa nke onwe na usoro nlekọta nne na nna ya. Gaa na ụlọ ọrụ gọọmentị nke ụlọ ọrụ ịzụta ma ọ bụ mụtakwuo banyere nsụgharị nke antivirus a.
Download ESET Cyber ​​Security
N'elu elu, anyị nyere nkọwa zuru ezu banyere usoro antivirus dị iche iche dị iche iche maka usoro sistemụ MacOS. Dị ka ị nwere ike ịhụ, ngwọta ọ bụla nwere atụmatụ ya na ọrụ pụrụ iche nke na-enye gị ohere ịmepụta nchebe a pụrụ ịdabere na ya ọ bụghị nanị megide egwu egwu dị iche iche, ma na-anwa imebi netwọk, na-ezuru okwuntughe ma ọ bụ zoo data. Lelee software niile ịhọrọ nhọrọ kacha mma maka onwe gị.